Fatapera sovoka - Wikipedia
Fampangotrahana rano amin'ny alalan'ny fatapera mandeha sovoka. Mipetraka eo ambony gazety ny vilany anefa dia mangotraka ihany ny rano.
Ny fatapera sovoka dia ireo fatapera mandeha amin'ny alalan'ny angovon'aratra izay manafana ny votoatim-patapera amin'ny alalan'ny rianaratr'i Foucualt, ka mampiasa ny atao hoe sovoka arak'anjanandrianaratra
Amin'ny karazana fatapera sahala izy ireo dia ahitana karazana antsody naorina amin'ny alalan'ny taribin'i Litz izay apetraka ambany velaram-pitaratra seramika. Rehefa lalovan-drianaratra miherina izy io (eo amin'ny manodidin'ny 25 kHz eo ho eo), dia mampiteraka sahan'andriamby izy mampiteraka rianaratra ao amin'ny vy (izay tsy maintsy mampita sahan'andriamby tsara) izay mahatonga ny hafanana amin'ny alalan'ny vokatr'i Joule.
Lafitsara[hanova | hanova ny fango]
Mora ny manadio azy noho izy ireo tsy manafana ny ranoka mety hiparitaka noho ny fihotrahana.
Kely kokoa ny fiparitahan'angovo (fana) ao amin'ny lakozia
Tsifisian'ny tsifiraikam-pana (tsy tahaka ny etona). Mijanona avy hatrany ny fanafàna rehefa tapahana ny vatsin'aratra na rehefa esorina ny vilany.
Lafiratsy[hanova | hanova ny fango]
Ny fananana vilany vy ary ny fananana fitaovam-panaovana lakozia miady tsara no anisan'ny lafiratsy. Mahatonga ny fahasimbana haingana amin'ny fibontsinan'ny vodivilany ny tsifiparitahan'ny hafanana vokatry ny sovoka. Ny fibontsinan'ny vilany dia vokatry ny elanela-mari-panan'ny fitaovana.
Mety hahasimba ny fitaovana mipetraka eo akaikiny ny fatapera, toa ny kara-pandoavana na ireo kasety. Tsy tsara ampiasain'ny olona mitondra pacemaker na mitondra solosofina izy ireo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fatapera_sovoka&oldid=769359"
Voaova farany tamin'ny 10 Jolay 2015 amin'ny 21:48 ity pejy ity.